Mogadishu Journal » 2019 » January » 8
Mjournal -Wafdi isugu jiro Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan xukuumada Soomaaliya ayaa maanta goor dambe u duulay Magaalada Garoowe oo lagu qabtay isla maanta doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulkaasi. Markii ay ka dageen garoonka diyaaradaha Garoowe durbadiiba waxa ay...
Mjournal :-Waxaa dhawaan Magaalada Garoowe lagu doortay Madaxweyne ku xigeenka cusub ee maamulka Puntland. Waxaana xildhibaanada maamulkaasi ay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi u doorteyn Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) madaxweynihii hore ee Khaatumo. Madaxweyne Dani iyo ku...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha iyo Madaxweyne K/Xigeenka cusub ee Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) iyo Mudane Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) oo...
Wafdi ka socda Dowlada Fedealka oo ku sii jeeda magaalada Garowe
Mjournal :-Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha DIbbada Dowlada Federalka Axmed Siciid Cawad ayna ka mid yihiin xildhibaano labada gole oo ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland ayaa ku sii jeeda magaalada Garowe oo dhowaan loo diiday wafdigan inay tagaan. Xubnaha wafdigan...
Madaxweynaha cusub ee Puntland oo goordhaw la doortay
Mjournal :-Waxaa goordhaw soo dhamaatay wareegii ugu dambeeyay doorashada Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka socotay magaalada Garawe, waxaana wareegii ugu dambeeyay doorashada ku tartamayay labo musharax. Doorashada waxaa ku guuleestay Musharax Saciid Cabdulaahi Dani oo helay...
Wareegii 3aad ee Doorshada Madaxweynaha Puntland (Saciid Deni iyo Jen. Asad Cismaan oo isugu soo haray)
Mjournal :-Waxaa Wareegga Saddexaad u soo gudbay Asad Cabdullaahi Cusmaan 30 Cod iyo Saciid Cabdullaahi Dani 29 Cod. Waxaa Wareegga Labaad ku haray Faarax Cali Shire oo helay 7 Cod. Wadarta guud ee codeysay waa 66 Xildhibaan, cod xumaaday ma jiro. Madaxweynaha Puntland...
Tirinta Codadka Wareega 1-aad oo soo dhamaatay Akhriso Sida Codadka loo kala helay
Mjournal :-Waxaa goordhaw soo dhamaatay tirinta codadka wareega koobaad ee doorashada Madaxweynaha Puntland, waxaana wareega koobaad codadka ugu badan helay Musharax Siciid Cabdulaahi Dani . Wareega koobaad ee doorashada waxaa hogaaminaya Musharaxa Saciid Cabdulaahi Dani oo...
Mjournal :-War kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu faah faahiyay howlgal ka dhan Alshabaab,kaasi oo ka dhacay 6-dii bishan Koonfurta Soomaaliya, waxaana mareykanka uu sheegay in uu Shabaab gaarsiiyay Khasaare. Warka ayaa lagu sheegay in Ciidamada oo...
Doorashadda Madaxweynaha Puntland oo maanta dhaceysa
Mjournal :-Magaalada Garowe ee Caasimada maamulka Puntland ayaa lagu waddaa in ay maanta ka dhacdo doorashadda Madaxweynaha maamulka Puntland iyo Madaxweyne ku xigeenkiisa maamulkaasi. Xildhibaanada Puntland oo ka kooban 66 Mudane ayaa maanta dooran doona hoggaanka Puntland...